2012-06-03 ~ Myanmar Express
ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှ အကြမ်းဖက်မှု နောက်ဆုံး သတင်းများ
From : The Voice Weeklyစစ်တွေတွင် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွား၊ လုံခြုံရေး အခြေအနေ စိုးရိမ် ရေမှတ် ရောက်ရှိ ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၉ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများမှာ စစ်တွေမြို့သို ကူးစက်လာခဲ့ပြီး ဘုမေ ကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား အများစု နေထိုင်ရာ ဓညဝတီ ရပ်ကွက်သို့ ဝင်ရောက် အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားခဲ့ရာမှ လုံခြုံရေး အခြေအနေ စိုးရိမ်ရေအမှတ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း မြို့ခံများထံမှ သိရှိရသည်။စစ်တွေမြို့ အခြေစိုက် တပ်မတော်သား ခြောက်ရာခန့်ကို ယမန်နေ့က ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားသော မောင်တော မြို့နယ်သို့ စေလွှတ်ထားသဖြင့် မြို့ပေါ်၌ လုံခြုံရေး အခြေအနေ အားနည်းမှုကို အခွင့်ကောင်း ယူကာ ယင်းကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုများ စတင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။“မြို့ထဲမှာ လုံခြုံရေး လုံးဝ မရှိဘူး။ လူတွေက အိမ်ပြင် မထွက်ရဲတော့ဘူး” စစ်တွေမြို့ မြို့မ ဈေးကြီးတွင် ကုန်စုံဆိုင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသူ ဒေသခံ အမျိုးသား တစ်ဦး လက်ရှိအခြေအနေကို သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ အများစုနေထိုင်ရာ ဘုမေကျေးရွာမှ အင်အား ၃၀၀ ခန့်က ရခိုင် တိုင်းရင်းသား အများစု နေထိုင်ရာ ဓညဝတီ ရပ်ကွက်သို့ ဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားရာမှ ပဋိပက္ခများ စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက် ထိန်းသိမ်းမှုကြောင့် ဆူပူ အကြမ်းဖက်သူများ နောက်ဆုတ် သွားခဲ့သော်လည်း လေယာဉ်ကွင်း အနီးရှိ ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း တစ်ခုကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြောင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီမှ ပါတီဝင် တစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။ယနေ့ည ၈ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်ကလည်း စစ်တွေမြို့ရှိ အဓိက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဝေနေသော မီးစက်ကြီးကို ဖျက်ဆီးရန် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး အင်အား ၃၀၀ကျော် ရောက်ရှိလာရာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၃၀ ဦးခန့်က တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းခဲ့ရကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံများက ပြောကြားသည်။“မီးပျက်သွားရင် ပိုဆိုးတော့မယ်။ ခုလည်း တစ်ညလုံး အိပ်လို့ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု စစ်တွေ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။အလားတူ ယနေ့ည ရှစ်နာရီခန့်က မင်းကံရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ် သုံးလုံးကို ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရာ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက The Voice Weekly သို့ ဆက်သွယ် ပြောကြားသည်။ထို့အပြင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ၏ အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် စိတ်မထိန်းနိုင်သော ရခိုင် တိုင်ရင်းသား အချို့က လေယာဉ်ကွင်း အနီးရှိ ဗလီတစ်လုံးကို မီးရှို့လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။စစ်တွေမြို့၏ လုံခြုံရေး အခြေအနေ စီမံ ဆောင်ရွက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ The Voice Weekly က ယနေ့ည ၉ နာရီခန့်တွင် စစ်တွေရဲစခန်းမှ အကြီးတန်း အရာရှိ တစ်ဦးကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ ဆူပူမှုများ ဖြစ်ပွားနေသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား တစ်ထောင်ကျော်က လုံခြုံရေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားသည်။From : Hmuu Zawဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ တင်ပြချက်ယနေ့ တွင် စစ်တွေ၌ အုပ်စုအလိုက် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံသည့် အခြေအနေ အချို့မှ လွဲ၍ အခြေအနေအားလုံး ထိန်းသ်ိမ်းနိုင်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာအချှို့တွင် မိမိတို့နိုင်ငံကို ဘာသာရေးအကြောင်းပြု၍ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းသည့် သဘောထားမျိုး ရေးသားနေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိ နေရပါသည်။ အချို့ဆိုလျှင် လူနည်းစုများအပေါ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ခတ်နေကြောင်း ဖော်ပြလျက်ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်၊ ထိုသို့ ရေးသားဖော်ပြနေကြခြင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုင်း အ၀ိုင်းမှလည်းကောင်း၊ အခြားဘာသာဝင်များမှလည်းကောင်း နားလည်မှုလွဲမှားစေနိုင်ပါသည်။(ထို့ကြောင့် ရရှိထားသော ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများကို တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်ကို သိရှိခြင်းသည် ထင်မြင်ယူဆချက်များ မှန်ကန်ရေးကို အထောက် အကူ ပြုစေမည် ဖြစ်ပါသည်။)အစိုးရများအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံအတွင်း၌ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ် များတွင် မည်သူ မှန်သည်၊ မည်သူမှားသည် ဟူ၍ ရည်ညွှန်းလိုခြင်း မရှိပါ။ အရာရာသည် Rule of Law အရသာ ဖြစ်စေရမည် ဖြစ်ပါသည်။တစ်ဖန် မိမိတို့နိုင်ငံသည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော ပြည်သူများ မှီတင်းနေထိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ တရားဥပဒေမဲ့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာသူ မည်သူ့ကို မဆို တရားဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ဤနိုင်ငံတွင် ပြဌာန်းထားသော တရားဥပဒေ များ ရှိပါသည်။ ဤနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကြကုန်သော နိုင်ငံသား အားလုံးသည် ဤနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများအတိုင်းသာ လိုက်နာကြရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို ချိုးဖောက်လာပါက ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများအတိုင်းသာ ဖြစ်စေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုအခွင့်အာဏာအရ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ မိဘပြည်သူများအားလုံးအနေဖြင့် အရာရာသည် Rule of Law အတိုင်းသာ ဖြစ်ရမည်ကို နားလည်မှု ရှိရှိ ယုံကြည်လက်ခံ၍ နိုင်ငံကြီးသား ကောင်းများပီပီ ဆင်ခြင်လိုက်နာသွားကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။စစ်တွေ ပဋိပက္ခ အသွင်ဆောင်မှု သေနတ်ပစ်ဖောက် ဟန့်တားလူမျိုးရေး အသွင်ဆောင်သော ပဋိပက္ခမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွါးနေသော ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်တွေမြို့တွင် ယနေ့ညနေ ၅နာရီခန့်က ဘုမေ ရွှာမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၃၀၀ခန့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သော ဓည၀တီ ရပ်ကွက်များဘက်သို့ ၀င်ရောက်လာ၍ ရပ်ကွက် ဒေသခံများ တားဆီးစဉ် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပဋိပက္ခ အသွင်ဆောင်လာသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကားငါးစီးဖြင့် ရောက်ရှိလာကာ သေနတ်ပစ်ဖောက် ဟန့်တားခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ချက်အရ သိရှိရသည်။မောင်တောဆူပူအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ၇ ဉီးသေဆုံးမောင်တောမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆပူအကြမ်းဖက်မှု့များကြောင့် သေဆုံးသူ ၇ဦးရှိကြောင်းပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏၀က်ဘ်ဆို ဒ်တွင် ယနေ့မွန်းလွဲ ၁နာရီ၃၀မိနစ်က ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည်။ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု့များကြောင့် ဒဏ်ရာရသူ ၁၇ဦးရှိပြီးအိမ်ခြေ ၄၉၄ လုံး၊ဈေးဆိုင်၁၉ခန်းနှင့် တည်းခိုခန်းတစ်ခု ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်။မောင်တောမြို့နယ် ဆူပူမီးရှို့မှုဖြစ်စဉ်တွင် ဆူပူသူများက မောရ၀တီ(နတလ)ကျေးရွာမှ ဗီဒီယိုရုံအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အတွက် ရွာသားများ ရွာမှ ထွက်ပြေးသွား ခဲ့ရကြောင်း၊ မောင်တောမြို့နယ် ရေရင်အေး(နတလ)ကျေးရွာမှ ရွာသားအချို့မှာလည်း ထိတ်လန့် ကြောက် ရွံ့ကြသဖြင့် ခရိုင်ထွေ/အုပ်ရုံးနားရှိ ပရဟိတကျောင်းနှင့် အောင်မြေဗောဓိကျောင်း များသို့ သွားရောက်ခိုလှုံနေရပြီး မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်(၁)တွင် လူစုလူဝေး အနည်းငယ် ရှိသဖြင့် ရဲတပ်ရင်းမှ လိုက်လံ ရှင်းလင်းခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ဇွန်လ ၈ ရက် ၁၄၁၀ ချိန် စစ်တွေမြို့ တက္ကသိုလ်ရှေ့ ဘူတာအနီး ရထားသံလမ်း မင်းဂံရပ် ကွက်နှင့် ဘုမေ၀ါယာလစ်ကျေးရွာအကြားတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (၃၀၀)ခန့်မှ ရထား သံလမ်းကို ကျော်လာပြီး ရခိုင်လူမျိုးများကို လာရောက်ဝိုင်းကြရာ ရခိုင်လူမျိုး(၁၀၀)ခန့်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး ခဲ၊ တုတ်များဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ရာ (၄)ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။“၁၄ ရွာက ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ခံလိုက်ရပါတယ်။ ၁၀ ရွာ လောက်ကတော့ အိမ်တချို့ ကျန်ခဲ့တယ်။ တချို့ရွာက မီးခိုးတွေ ထွက်နေတုန်းပဲ၊ ကျမတို့ဘ၀တွေ လုံခြုံမှု မရှိတော့ဘူး။ စားစရာဝယ်ဖို့လဲ အပြင်မထွက်ရဲဘူး” ဟု ဒေသခံအမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။စစ်တွေမြို့စွန်ရှိ ဘုမေရွာ၊ နာဇီရွာများမှ ဘင်္ဂါလီများသည် စစ်တွေမြို့အတွင်း ၀င်ရောက်ရန်ကြိုး ပမ်းနေသဖြင့် စစ်တွေမြို့မလမ်းတစ်လျှောက်နှင့် လောကနန္နာ ဘုရားအနီးတစ်ဝိုက်တွင် မှာ မြို့ခံများ စုဝေးနေပြီးဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ စစ်တွေမြို့ တွင်းဝင်ရောက် ရန်ကြိုးပမ်းနေ သည်ကိုရဲ များတပ်မတော်သား များကမ ၀င်ရောက် နိုင်အောင် ထိန်းနေသော် လည်းလုံခြုံရေး အင်အားနည်းပါးလျှက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသား သံဃာတော်အချို့ ဦးဆောင်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၅၀၀ကျော် ပါဝင်သည့် လူစုလူဝေးသည် ယခုအခါ ရွှေတိဂုံဘုရားကို လက်ယာရစ်သုံးပတ် ပတ်ကာ ဗုဒ္ဒဟူးထောင့်တွင် ဆုတောင်းနေကြကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။မောင်တောမြို့သို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရောက်ရှိနေကြောင်း မောတောမြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက 7DayNews သို့ပြောသည်။ဘူးသီးတောင်- မောင်တောဒေသရှိအချို့နေရာများတွင် နေထိုင်သည့်ပြည်သူအယောက်၅၀၀ခန့်အဆက်အသွယ်မရရှိဘဲပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိကြောင်း စစ်တွေမြို့ရှိ7DayNewsသတင်းထောက်ကပေးပို့သည်။ ပျာက်ဆုံးသည့်ပြည် သူများတွင် ယင်းဒေသကျေးရွာများသို့ သွားရောက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြသောပညာရေး ၀န်ထမ်းများ၊ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများပါ ၀င်ကြောင်း သိရသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရမှလုံခြုံရေးယူပေးထားကြောင်းဘင်္ဂလားတွင်ရောက် ရှိနေသည့် ရခိုင်အမျိုးသားကိုနိုင်နိုင်က ပြောသည်။စစ်တွေမြို့၊ လေယာဉ်ကွင်းလမ်းမတွင် ဘင်္ဂါလီတစ်ဦးကမိမိနေအိမ်ကိုမီးပြန်ရှို့သဖြင့်မီးသတ်ကား များလာရောက်ငြိမ်းသတ်ခဲ့ ရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းသည့်နေအိမ်အနီးတွင်ရခိုင်လူမျိုးများနေထိုင်သည့် အိမ်များရှိသည်ဟု စစ်တွေမြို့ရှိ သတင်းထောက်က ပေးပို့သည်။ယခုတွင် စစ်တွေမြို့လမ်းများပေါ်တွင် ရခိုင်လူမျိုးများ စုရုံးလျှက်ရှိပြီး နာဇီ၊ ဘုမေ၊ ကသဲရွာများမှဘင်္ဂါလီများမှာမိမိတို့ကျေးရွာများအတွင်းတွင် ပင် ရှိနေကြကြောင်း သိရသည်။ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ရှိ သပိတ်တောင်ကျေးရွာနှင့် အာကာပြင်ကျေးရွာတို့မှရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းကစတင်ကာ စက်လှေ ၃ စင်းနှင့် ခေါက်ပြန် သယ်ယူကယ် ဆယ်နေကြောင်း ဘူးသီးတောင်တွင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူ ဒေသခံက ပြော ကြားသည်။ ယင်းသို့ကယ်ဆယ်နေ ရာတွင် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်ရရှိသောသတင်းများအရ ဘူးသီးတောင် အ.လ.က ၁ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်သားအယောက် ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။မောင်တောတွင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၃ ခုဖွင့်မောင်တောမြို့နယ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၃ ခုဖွင့်လှစ်ကာကူညီစောင့်ရှာက် မှုပေးလျက်ရှိ်ပြီး ဆေးဝန်ထမ်းများလည်း ရောက်ရှိကာ ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက် မှုပေးလျက်ရှိကြောင်း ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက နာရီပိုင်းအတွင်းက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။မောင်တောမြို့နယ်၌ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာတည်ငြိမ်းအေး ချမ်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော် ပြထားသည်။ ဒေသအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ထိန်းသိမ်းဆောင် ရွက်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးဌာန၀န်ကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုး လူမှုဝန်ထမ်းကယ် ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီးတို့မောင်တောမြို့သို့ရောက်ရှိကွပ်ကဲလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသတွင် လုံခြုံရေးအင်အားနည်းနေပြီး ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသည့်အပေါ် လူနည်းစုဒေသခံများ စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း ရခိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(မောင်တော) ဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။ယင်းဒေသတွင် ရခိုင်လူမျိုး နှစ်သောင်းကျော်၊ ဗမာနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား နှစ်သောင်းခန့်နှင့် ဘင်္ဂါလီ လေးသိန်းခြောက်သောင်းခန့ရှိသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။“လုံထိန်း၊ စစ်တပ်နဲ့ ရဲက နှစ်ရာလောက်ပဲရှိတာ။ အခုလောလောဆယ် ရွာနှစ်ရွာစီက အိမ် လေးအိမ်စီ မီးရှို့ခံထားရပြီးပြီ။ ရခိုင်လူမျိုး ဆယ်ယောက် ဒဏ်ရာရထားတယ်။ လုံခြုံရေးထပ်တောင်းထားတယ်။ ရောက်မလာသေးဘူး။ ဒီညအတွက် စိတ်ပူနေကြတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာအချို့၏ စနစ်တကျ ထိုးဖောက်မှုကြောင့် ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာများ အမှန်အတိုင်း ရေးသားဖော်ပြရန် ခက်ခဲနေဟုဆိုအစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ အစည်းအချို့သည် ပြည်ပသတင်းမီ ဒီယာများတွင် စနစ်တကျ ထိုးဖောက် ဝါဒဖြန့်ချိမှုများပြုလုပ်ထားမှုကြောင့် ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာ အချို့အနေဖြင့် အမှန်အတိုင်း ဖော် ထုတ်ရေးသားရန်ခက်ခဲနေပြီး ရိုဟင် ဂျာလူမျိုးများဘက်သို့ အသားပေး ဖော်ပြမှုများရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်ပ သတင်းဌာနတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ဝါရင့်သတင်းထောက်တစ်ဦးကပြော သည်။ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ၊ NGO အဖွဲ့အစည်း များအထိထိုးဖောက်ဝင် ရောက်ထား မှုများကြောင့် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြစ်မှန်ဖော် ထုတ်ရာ ၌ ခက်ခဲနေရပြီး၊ ပြည်ပသတင်းဌာန များတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ အနေ ဖြင့်လည်း ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအမှန်အတိုင်း တင်ပြပြောဆိုရန် အခက်အခဲ များရှိ နေကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။ အခြေအနေမှန်ကိုမသိရတော့ ဆောင် ရွက်လာမယ့် အရေးယူမှုတွေက လည်း တလွဲတချော်တွေ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်။ တုန့်ပြန်မှုတွေကလည်း တလွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစွန်းရောက်ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားများ သည် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အခြေ စိုက်ထားသည့် မီဒီယာများအပေါ် တွင် သြဇာလွှမ်းမှုရှိပြီး အရေးကြီး သည့်နေရာများတွင် ထိုးဖောက်စည်း ရုံးထားမှုများ ရှိနေကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။ပြည်ပမီဒီယာများ၌ ရိုဟင် ဂျာသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ''ကျွန်တော်တို့ ပြည် တွင်းမီဒီယာသမားတွေလည်း ရေး သားဖော်ပြနေတာပဲလေ။ သတင်း အမှန်ဖြစ်အောင်၊ မဖြစ်သင့်တာမဖြစ် အောင် ပြည်သူတွေသိအောင်လို့ ဖော် ပြပေးရမှာပဲ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပါ။ ရိုဟင် ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရေး သားဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းစာမျက် နှာတွေကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်'' ဟု Weekly Eleven ဂျာနယ်မှ တာဝန်ခံအယ် ဒီတာ ကိုဝေဖြိုးက ပြောသည်သတင်းမှားဖော်ပြ နေသော ဘီဘီစီ အား တောင်းပန်ရန် ဆန္ဒပြနေပုံအကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်သို့ ယနေ့ ရောက်ရှိလာသည့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်းက နယ်မြေလုံခြုံရေး တပ်မတော်က ကာကွယ်ပေးထားပြီဖြစ်၍ ပူပန်စရာ မလိုတော့ကြောင်း ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများကို ကတိပေးပြောဆို သွားသည်။ယမန်နေ့က ဆူပူအကြမ်းဖက်သူများက မောင်တော မြို့ပေါ်နှင့် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရခိုင်နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများ၏ ကျေးရွာ ၂၀ ခန့်နှင့် မြို့ပေါ်ရှိအဆောက်အဦးအချို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး မြို့ခံရဲများက တားဆီးနေသည့်ကြားမှ ရခိုင်နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား ၅ ဦးထက်မက သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။မွတ်ဆလင် အများစုနေထိုင်သော ယင်းဒေသတွင် လူနည်းစုဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားများမှာ အိုးအိမ်ပျက်ဆီးမှု၊ အသက်အန္တရာယ် စိုးရွံ့မှုများကြောင့် မြို့ပေါ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် အစိုးရ အဆောက်အဦး တို့တွင် ခိုလှုံနေကြပြီး ထိုဒုက္ခသည်များကို ဒူ-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များက ယနေ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ အားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“လုံခြုံရေးတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ နောက်ထပ် ဒီလိုမျိုး မဖြစ်အောင်လို့ လုံထိန်းအင်အား၊ တပ်အင်အားတွေကို မြှင့်တင်ပေးမယ်ပေါ့။ ဒီလူတွေ အတွက်လည်း မပူနဲ့ စားစရာ သောက်စရာတွေလည်း ပေးမယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်လှမင်းက ပြောသွားတယ်” ဟု မောင်တောရှိ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်း ဆရာတော် တပါးက မိန့်ကြားသည်။ဆရာတော်က ထပ်ပြီး “ကြောက်လန့်နေတဲ့လူတွေကိုလည်း အားပေးတယ်။ မီးလောင် ဆုံးရှုံးသွား တဲ့အိမ်တွေ ပြန်စရာမရှိလို့ လောလောဆယ် ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ ခေတ္တခဏ နေထိုင်ပြီးတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အိမ်တွေဆောက် ပေးမယ် ပြောတယ်” ဟု ဆက်ပြောသည်။အကြမ်းဖက်သူများ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စဉ် အနီးအနားရှိ တောတောင်များအတွင်း ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ခဲ့ကြသော ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများကို အစိုးရတပ်များမှ ဦဆောင်ကာ လိုက်လံ ကယ်ဆယ်လျက်ရှိပြီး မြို့ပေါ်ရှိ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်း၊ ဗဟိုကျောင်းနှင့် အောင်မြေဗောဓိကျောင်း အပါအဝင် စာသင်ကျောင်းနှင့် အစိုးရ အဆောက်အဦး အချို့တွင် ကယ်ဆယ်ထားပြီး အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းတခု တည်းတွင်ပင် ၄၀၀ ကျော်ရှိနေသည်။အဆိုပါကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးဘုန်းဆွေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကိုကိုနိုင်တို့ လာရောက်ပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ကြကြောင်း ဒုက္ခသည်များက ပြောသည်။ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးနေသော တိုင်းရင်းသားများကို ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရန်နှင့် ကယ်ဆယ် ထားသူများကို ပြန်လည်နေရာချထားရေးများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် နေပြည်တော်က ညွှန်ကြားမှုဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှု စစ်ဆေးရေးနှင့် ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် မှ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီးကို တာဝန်ပေးအပ်ထားကြောင်းသိရသည်။ထို့အတူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကို ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီး ဦးဆောင်သော ၇ ဦးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်ကြောင်း ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သော နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကလည်း ဆိုသည်။“ဦးဇင်းတို့ မြို့ပေါ်မှာလည်း စစ်တပ်က လုံခြုံရေးယူထားပေးပါတယ်။ နောက် နယ်တွေဘက်မှာရော၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ရွာတွေဘက်မှာရော ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့နေရာတွေမှာရော အကုန် လုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်။ အခြေအနေတွေကတော့ ငြိမ်သက်သွားပြီဆိုပေမယ့် လူတွေက သွေးလန့်နေကြတယ်” ဟု အလိုတော်ပြည့်ကျောင်း ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှ စပြီး ယနေ့နံနက် ၅ နာရီထိ မောင်းတောမြို့နယ်အတွင်း ရခိုင်နှင့် အခြား တိုင်းရင်း သားများ နေထိုင်သည့် အိုးအိမ်နှင့် လုပ်ငန်းများကို အကြမ်းဖက်သူများက ဖျက်ဆီးခဲ့ကြရာတွင် ကျေးရွာ ၁၇ ရွာ လုံးဝပြာကျပျက်စီးခဲ့ပြီး တချို့ရွာများလည်း မီးရှို့ခံခဲ့ရသေးသည်။ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရသော ကျေးရွာခံများ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းကို ရောက်ရှိပြီး ဒဏ်ရာများနှင့် မောင်တောဆေးရုံမပို့ဆောင်မီ ဧရာဝတီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့သည်။“ကျမတို့ကလည်း အစက အစိုးရလုံခြုံရေး လာမယ်ဆိုပြီးစောင့်နေပါတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ဘူး အထင်နဲ့နေခဲ့တာ သူတို့က အုပ်စုလိုက်ကြီး ဝင်လာပြီး ကျမတို့ကို ဝိုင်းပြီး ခုတ်တာ တရွာလုံးကို၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းက စပြီး တရွာလုံးမီးရှို့တယ်။ ပြေးတဲ့လူတွေကို နောက်ကလိုက်ပြီးဓားနဲ့ခုတ်ပါတယ်။ ကျောင်းဆရာ တယောက်နဲ့ သုံးယောက်ပွဲချင်းပြီး ဆုံးသွားပါတယ်” ဟု ဒဏ်ရာများရရှိနေသော ရခိုင်အမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။၎င်းကိုယ်တိုင် လက်နှင့် ပုခုံးများတွင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူလည်း ချိန်းကြိုးဖြင့် ရိုက်ခံထားရသဖြင့် ဆေးရုံတင်လိုက်ရသည်။ အကြမ်းဖက်သူများသည် နယ်မြေခံများသာမက မျက်နှာစိမ်း လူများကိုပါတွေ့ရကြောင်း ထိုသူများက အတင်းဝင်ရောက်၍ ပစ္စည်းများလုယက်ခြင်း အသက်ရန်ရှာခြင်းများ ပြုလုပ်ကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။ပုန်းအောင်းနေရာမှ လွတ်မြောက်လာသည့် အခြား အမျိုးသမီးတဦးကလည်း “ကျမတို့က တောထဲမှာ ကုလားတွေ ရှာမတွေ့အောင်ပုန်းနေရတာ၊ သူတို့ကတွေ့ရင် သတ်မှာ၊ ဒီမနက် မီးလောင်တဲ့နေရာတွေမှာ စစ်တပ်တွေရောက်လာတာ နေရာယူတာတွေတော့ အားရှိသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ တောထဲကနေ ပြေးထွက်ပြီးတော့ အကူအညီ တောင်းတယ်။ တပ်က ကျမတို့ တဖွဲ့လုံးကို ကယ်လာတာ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။လတ်တလော အစိုးရက နယ်မြေအေးချမ်းလုံခြုံရေးအတွက် ညမထွက်ရအမိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ကိုထုတ်ပြန်ထားသည်။ အစိုးရတပ်များ နေရာအနှံ့ လုံခြုံရေးယူပေးထားသည်ကို တွေ့ရပြီး အကြမ်းဖက်သူများ ထပ်မံထွက်လာခြင်းကို မတွေ့ရဟု ဒေသခံများကပြောသည်။မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော မောင်တောမြို့တွင် မြို့ခံ ရခိုင်များအပါအဝင် တခြား တိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ အစိုးရရုံးဝန်ထမ်းများ၊ လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ NGO အဖွဲ့များသည် မောင်တောမြို့ပေါ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် သွားရောက်ခိုလှုံနေရကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရက လုံခြုံရေးတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော်လည်း မောင်တောမြို့၏ မြို့စွန်နေရာများတွင် နေထိုင်သော အနည်းစု မြန်မာတိုင်းရင်းသားများမှာလည်း လုံခြုံရေးစိုးရိမ်နေရကြောင်း သိရှိရသည်။ယခု ည ကိုးနာရီတိတိတွင် စစ်တွေမြို့၌ သံချောင်းခေါက်သံများဆူညံနေပြီး မီးသတ်ကားများမှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများနေထိုင်ရာကျေးရွာနှင့် ရခိုင်လူမျိုးများနေထိုင်ရာ ကျေးရွာအစပ်ဖက်သို့ ထွက်ခွာသွားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း စစ်တွေမြို့ရှိ 7Day News သတင်းထောက်က ပေးပို့သည်။ စစ်တွေမြို.ပေါ်ရှိ လောကနန္ဒာစေတီအနီးတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက သံချောင်းများခေါက်ကာ စုစည်းနေကြရန်သတိပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။Myanmar Express
ဒီကနေ့ နောက်ဆုံးရ မောင်တောမြို့နယ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
Myanmar Express Read More
အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာအချို့၏ စနစ်တကျ ထိုးဖောက်မှုကြောင့် ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာများ အမှန်အတိုင်း ရေးသားဖော်ပြရန် ခက်ခဲနေဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၉၊ ၂ဝ၁၂
အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ အစည်းအချို့သည် ပြည်ပသတင်းမီ ဒီယာများတွင် စနစ်တကျ ထိုးဖောက် ဝါဒဖြန့်ချိမှုများပြုလုပ်ထားမှုကြောင့်
ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာ အချို့အနေဖြင့် အမှန်အတိုင်း ဖော် ထုတ်ရေးသားရန်ခက်ခဲနေပြီး ရိုဟင် ဂျာလူမျိုးများဘက်သို့ အသားပေး
ဖော်ပြမှုများရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်ပ သတင်းဌာနတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ဝါရင့်သတင်းထောက်တစ်ဦးကပြော သည်။
နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ၊ NGO အဖွဲ့အစည်း များအထိထိုးဖောက်ဝင်
ရောက်ထား မှုများကြောင့် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြစ်မှန်ဖော်
ထုတ်ရာ ၌ ခက်ခဲနေရပြီး၊ ပြည်ပသတင်းဌာန များတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ
အနေ ဖြင့်လည်း ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအမှန်အတိုင်း တင်ပြပြောဆိုရန် အခက်အခဲ
များရှိ နေကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။
အစိုးရက မီဒီယာအပေါ်ကိုင် တွယ်မှု အားနည်းနေသေးတာကြောင့်
နိုင်ငံတကာ ကတကယ့်အဖြစ်အမှန်အ ပေါ် နားလည်မှုလွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေမှန်ကိုမသိရတော့ ဆောင် ရွက်လာမယ့် အရေးယူမှုတွေက လည်း တလွဲတချော်တွေ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်။ တုန့်ပြန်မှုတွေကလည်း တလွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစွန်းရောက်ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားများ သည် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အခြေ စိုက်ထားသည့် မီဒီယာများအပေါ် တွင် သြဇာလွှမ်းမှုရှိပြီး အရေးကြီး သည့်နေရာများတွင် ထိုးဖောက်စည်း ရုံးထားမှုများ ရှိနေကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
ပြည်ပမီဒီယာများ၌ ရိုဟင် ဂျာသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ''ကျွန်တော်တို့ ပြည် တွင်းမီဒီယာသမားတွေလည်း ရေး သားဖော်ပြနေတာပဲလေ။ သတင်း အမှန်ဖြစ်အောင်၊ မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်
အောင် ပြည်သူတွေသိအောင်လို့ ဖော် ပြပေးရမှာပဲ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပါ။ ရိုဟင် ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရေး သားဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းစာမျက် နှာတွေကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်''ဟု သတင်းထောက်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
From : ရာဇ၀င်
သာကီနွယ်ဖွား မြန်မာအပေါင်းတို့ ထကြကုန်လော့....ထကြလော့
ရန်လာဆောင်တဲ့ ဘင်္ဂလီဖွားခေါ်တောကုလား အပေါင်းတို့အား............
သတ်ဖို့မနှေး ထကြကုန်လော့...... Myanmar Express Read More
အမေအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ရခိုင်သားလေးတစ်ယောက်၏ ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာ
From : လုလင်ငယ်သွေး
အမေ့ကို မြင်မြင်ချင်း မျက်ရည်လည်းကျခဲ့ဖူးတယ်
" ဟေး " ခနဲအော်လိုက်တဲ့ လူတွေထဲ
သားလည်းပါခဲ့ဖူးတယ် . . .
တခါမှ မငြိုငြင်ခဲ့ဖူးအမေ . . .
မှတ်ယူ နစ်ဝင်နေခဲ့တာပါ အမေ . . .
အမေရဲ့ သမီးပါပဲ အမေ
လည်မျိုနုန ကို ဓါးနဲ့ဟက်တက်လှီး
ကြားယောင်ကြည့်ပေါ့ အမေ . . .
ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေထဲက စိတ်ဆတ်သူတွေသတ်မိတော့
အမေပြောတဲ့စကားကို ကြားယောင်ပြီး သိပ်ရှက်မိတယ် အမေ
စာနာသနားရတယ် ဆိုလား ဘာဆိုလား အမေ
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ . . . ကျနော် အကိုတွေ
မလိမ်မာ တခါမိုက် ရာဇ၀င်တောင်တွင်လိုက်သေးတယ် အမေ . . .
မြန်မာမွတ်ဆလင်ပါ ဆိုသူတွေလည်း ဆန္ဒပြ
အမေက လည်း မော်လ၀ီဆိုသူကြီးတွေကိုနှစ်သိမ့်
ပြည်ထောင်စုအလံအောက်ကို ခိုခဲ့ကြတာပါ အမေ
ကျနော်တို့ထက် သူတို့က ပိုအရေးကြီးနေသလား ???
အခု မောင်တောမြို့မှာ ကျနော်တို့ သားချင်းတွေ
မီးလောင်တိုက်သွင်းခံရ ဓါးနဲ့ခုတ်ခံရ ဒုတ်နဲ့ရိုက်ခံရ
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်ဒေသမှာ
ဒီလိုလုပ်ခံရတာအမေ . . . ပြောပါဦးလေ
အားကြီးသူတွေ . . . အားနွဲ့သူတွေ . . .
နာတယ် အမေ နာတယ်
ဟောဒီ ရင်ဘတ်က တဆစ်ဆစ်နာတယ် . . .
အမေ ကိုလည်း မေ့လိုက်ပါပြီ
မနေသာတဲ့ သားတို့ ညီအကို နိုင်ငံသားတွေ
လေညာကဆင်းပြီး ၀င်ပါကြပါလိမ့်မယ် . . .
ကျနော်တို့လည်း နာသာသလိုသာ နာလိုက်ပါတော့မယ် . . .
မောင်းတောတွင် မွတ်ဆလင်များ၏ မီးရှို့မှု၊ ဖျက်ဆီးမှု မြင်ကွင်းများ (ဓာတ်ပုံ)
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်မြင်ကွင်းဓါတ်ပုံများ ဇွန်လ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်ကမောင်တောမြို့ မြို့တော်ခန်းမအနီးရှိ မီးရှို့ခံခဲ့ရသော သဇင်တည်းခိုခန်း အနီးမြင်ကွင်း မောင်တောမြို့ မြို့တော်ခန်းမအနီးနှင့် နာရီစင် လမ်းဆုံအနီး ဇွန်လ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်မြင်ကွင်း မောင်တောမြို့ မြို့တော်ခန်းမအနီးရှိ မီးရှို့ခံခဲ့ရသော သဇင်တည်းခိုခန်း အား ဇွန်လ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်မြင်တွေ့ရစဉ် မောင်တောမြို့ မြို့တော်ခန်းမအနီးရှိ မီးရှို့ခံခဲ့ရသော သဇင်တည်းခိုခန်း အား ဇွန်လ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်မြင်တွေ့ရစဉ် ဓါးဖြင့် အထိုးခံရပြီး မောင်တောမြို့ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် ဒေါက်တာ ခင်မောင်လတ် ဓါးဖြင့် အထိုးခံရပြီး မောင်တောမြို့ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် ဒေါက်တာ ခင်မောင်လတ်၏ ဇနီး မောင်တောမြို့ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် ဒေါက်တာ ခင်မောင်လတ်၏ သားကို တွေ့ရစဉ် မောင်တောမြို့ ဆေးရုံ မြင်ကွင်း မောင်တောမြို့ မြို့တော်ခန်းမအနီးရှိ မီးရှို့ခံခဲ့ရသော သဇင်တည်းခိုခန်း အား ဇွန်လ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်မြင်တွေ့ရစဉ် မောင်တောဖြစ်စဉ် (ဇွန်လ ၈ ရက်)၊ ထပ်မံရရှိသောဓါတ်ပုံများ မောင်တောမြို့နယ်၊ သားရေကုန်းဘောင်ကျေးရွာတွင် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က တွေ့ရသည့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများ မောင်တောမြို့နယ်၊ သားရေကုန်းဘောင်ကျေးရွာ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က မီးရှို့ခံရမှုကို တွေ့ရစဉ် မောင်တောမြို့နယ်၊ သားရေကုန်းဘောင်ကျေးရွာတွင် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က တွေ့ရသည့် မီးရှို့ခံရမှု ဒဏ်ရာရလူနာအချို့အား ယနေ့ (ဇွန်လ ၉ ရက်က) စစ်တွေသို့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်စဉ် မောင်တောမြို့နယ်၊ သားရေကုန်းဘောင်ကျေးရွာတွင် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က တွေ့ရသည့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများ မောင်တောမြို့နယ်၊ သားရေကုန်းဘောင်ကျေးရွာတွင် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က တွေ့ရသည့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများ Myanmar Express
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် လူကုန်ကူးမှု ၁၂၀ မှု ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်းမှာ လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ အနေနဲ့ လူကုန် ကူးမှု အမှုပေါင်း ၁၂၀ မှုကို ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ
ဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရပါတယ်။ အခုလို လူကုန်ကူးမှု အမှုပေါင်း ၁၂၀ မှုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲမှာ ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပြီး တရားခံ ၃၀၇ ဦးကို အရေးယူ နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူကုန်ကူး ခံရသူ ၁၅၄ ဦးကို ကယ်တင်ပြီး မိသားစုများနဲ့ ပြန်လည် ပေါင်းစည်း ပေးနိုင်ခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်းမှာ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကို အခြေပြုပြီး တရုတ် နိုင်ငံကို လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး စီမံချက်ကို တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် ၆ ခုမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါ စီမံချက်အရ အရင်က တရုတ်နိုင်ငံကို ဦးတည်တဲ့ လူကုန်ကူးမှုဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ အမှုရဲ့ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
အထူး စီမံချက် ဆောင်ရွက်မှု အပြီးမှာတော့ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျော့ကျ သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်းမှာ လူကုန်ကူးမှု ဆိုင်ရာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဥပဒေများ၊ စာချုပ်များ၊ သတင်း အချက်များ ကိုတော့ www. myanmarhumantrafficking.gov.mm မှာ ဖတ်ရှု လေ့လာ နိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
From : ကိုလေးကို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့မှ လက်နက်ကိုင်တချို့ က တပ်တွင်းပုံကန်မှု ကို စတင်ခဲ့ပြီး နောက် မြို့တော် ဒက္ကာ ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရိုက်ဖယ်စစ်တပ်ဌာနချုပ်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ယခုအခါ စစ်တပ်နှင့် လက်နက်ကိုင် တပ်တွင်း ပုံကန်သူတွေ အကြား အပြန်အလှန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး လူသုံးဦးထက်မနည်းသေဆုံးကာ ၂၁ ယောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဒက္ကာမြို့က လာတဲ့သတင်း အရ သိရှိရပါတယ်။ တချို့ သတင်းတွေထဲမှာ တော့ သေဆုံး သူတွေ၊ ဒဏ်ရာရသူတွေဟာ လူ ၅၀ ထက်မနည်းရှိကြောင်း၊ သေဆုံးသူတွေထဲမှာ အရပ်သားကော၊ အရာရှိ နှင့် စစ်သားတွေကော ပါရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်တပ်က ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် အမြဲတမ်း စစ်တပ် ကို ခေါ်ယူပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရိုက်ဖယ်စစ်တပ်ဌာနချုပ်ကို ပြန်လည် ၀ိုင်းရံထားကြပါတယ်။ ပုန်ကန်သူ တွေဟာ အထက်အရာရှိတွေရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတဲ့ အောက်ခြေ နယ်ခြားစောင့် ရဲဘော်တွေ အများစုဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ မှာလည်း လုံခြုံရေးတာဝန်ယူ ခဲ့ကြရသူများဖြစ်ကြတယ်။
မြို့တော် ဒက္ကာမှာ ပြင်းပြင်ထန်ထန် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၀န်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာစီနာ က ပုန်ကန်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ကို သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ ဆွေနွေးမှုမှာပါဝင်တဲ့ ပုန်ကန်တဲ့ သူတွေ ဘက်က ကိုယ်စလှယ်က ဒီလိုကမ်းလှမ်းခဲ့မှုကြောင့် သူတို့လက်နက်တွေကို ပေးအပ်ပြီး စစ်တန်လျား နှင့် တပ်စခန်းတွေဆီသို့ ပြန်သွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ဒီလို စစ်တပ်အတွင်း ပုန်ကန်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းဟာ အောက်ခြေ ရဲဘော်များ လစာနည်းပါးနေမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရမှု၊ တပ်တွင်းထောက်ပံ့မှု ရာရှင် မလုံလောက်မှု၊ ညံ့ဖျင်းမှု၊ သူတို့ အလုပ်အကိုင်အတွက် မသေချာမရေရာ ဖြစ်နေမှု အပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်ရာက အထက် စစ်တပ်အရာရှိများ နှင့် အောက်ခြေ အကြား တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ပုန်ကန်မှု စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထက် စစ်တပ်အရာရှိများ က လစာတိုးတောင်းမှုကို ပယ်ချခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ တောင်းဆိုတဲ့ ထောက်ပံ့မှု ရာရှင် ကို မလုံမလောက်ရရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို အထက် အရာရှိနှင့် အောက်ခြေရဲဘော်များ အကြား တင်းမားမှု ဖြစ်ပေါ်နေတာဟာ လ ပေါင်းများစွာ ရှိနေပြီလို့ ဖော်ပြပါရှိတယ်။
အခင်းဖြစ်စဉ် ဒက္ကာမြို့ ရိုက်ဖယ် ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်မှာ တပ်သား ၅၀၀၀ နီပါး ရှိခဲ့သော်လည်း ပုန်ကန်သူတွေက လျင်မြန်စွာ ထိမ်းချုပ်လိုက်ပြီး၊ စစ်တပ် သုံး ဟယ်လီကော်ပတာ တွေကို ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒါဇင်များစွာ အရာရှိ အချို့ ကိုလည်း ဓာစားခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရုပ်မြင်သံကြား ဌာန တွေက ရိုက်ဖယ် ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် ရှိ တပ်မှူး ဟာ တိုက်ပွဲမှာ သေဆုံးခဲ့လား၊ ဒဏ်ရာ ရခဲ့သလားဆိုတာ အတိအကျ မသိရှိရ သေးဘူးလို့ဆိုတယ်။
၀န်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာစီနာ ကြားဝင် ၀င်ရောက်မဖြေရှင်းခင်မှာ တော့ ဘင်္ဂလားဒေ့စစ်တပ် က ပုန်ကန်သူတွေကို ထွက်လာပြီး လက်နက်ချကာ စစ်တန်လျားကို ပြန်သွားဖို့ နှင့် အမိန်မနာခံသူတွေနဲ့ မထွက်လာသူတွေကို ပြင်းပြင်း အရေးယူမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ၀န်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာစီနာ က ကြားဝင်ဖြေရှင်းခဲ့တာကြောင့် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နဲ့ အဆုံးသတ်သွား ကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ ၁၉၇၁ မှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက လွတ်လက်ရေး ရယူပြီးနောက် ဒီလို လက်နက် ဖြင့်ပုန်ကန် ထကြွမှု၊ အာဏာသိမ်းမှု၊ တန်ပြန် အာဏာသိမ်းမှု ၊ နှင့် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၈၂ မှ ၁၉၉၀ ထိ တိုင်းပြည်ကို စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အာဆတ် က အာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်စတင်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ မှာ ဒီမိုကရေစီ စံနစ် ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ်က ရွေးကောက်ပွဲ ဖျက်သိမ်းပြီး၊ အရေးပေါ် အခြေအနေကြေညာခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ပဲ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျကျ ဖြင့် နိုင်ငံတကာ ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပပေးပြီး နောက် ရှိတ်ဟာစီနာ ဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
8-6-2012 နေ့ စစ်တွေတွင် ကုလားများတိုက်ခိုက်ခံရသူများ . . .
From :ဒီနွယ်ဦး ယမန်နေ့(၈-၆-၂၀၁၂) ညနေ (၃)နာရီခန့်အချိန် စစ်တွေမြို့မှ မှန်စီသုသာန်သို့ အသုဘချပြီး ပြန်လာသော ယာဉ်တန်းများကို ကားလမ်းဘေးရှိ ဘင်္ဂလီကုလားရွာများမှ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒါဏ်ရာရသူများ ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကားပေါ်မှ အော်ဟစ်ဆူညံသံများကြားသောအခါ မင်းဂံကျေးရွာရှိ ရခိုင်အမျိုးသားများမှ ရွာပြင်ဖက်သို့ထွက်ကြည့်ရာတွင် ဘုမေကျေးရွာအုပ်စု ၀ါယာလိတ်ရွာနှင့် လက်သမားရွာရှိ အိစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကုလားများဝတ်ပြုရာ ဗလီအတွင်းမှာ လူနှစ်ရာခန့် ထွက်လာပြီး မင်းဂံ ရွာအနီး ရထားလမ်းဘေးတွင် နေထိုင်သူ ဖော်ပြပါ ဓာတ်ပုံပါ ခြောက်ဦးအား လေးဂွ တုတ်ပုလင်းများ၊ ခဲများဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒါဏ်ရာရရှိပြီး နှစ်ဦးမှာ စစ်တွေဆေးရုံ၌ တက်ရောက်ကုသခံနေကြရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၄င်းနေ့ညနေ လေးနာရီခွဲအချိန်တွင် မှန်စီကျေးရွာ(ရခိုင်ရွာ)တွင် အိမ်ခြေ ၂၂ လုံးသာရှိပြီး ရခိုင် မိသားစုဝင်များ လုံခြုံမှုမရှီသောကြောင့် ကျေးရွာတွင်မအိပ်ရဲဘဲ စစ်တွေမြို့အနီးရှိမင်းဂံနှင့် ရွာသာယာကျေးရွာ များသို့ သွားရောက်ခိုလှုံနေထိုင်ကြရ ကြောင်းသိရှိရသည်။
From : မြန်မာသံတော်ဆင့်“People are unable to forgive what they cannot punish.”- (a line fromatextbook on international human rights)ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မိန်းခလေးတစ်ဦးအားဝိုင်းဝန်း၍မုဒိမ်းကျင့်၊လူကိုသတ်ပြီး၊ပစ္စည်းတွေပါယူသွားသောအမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ကျူးလွန်သူများသည်လူမျိုးဘာသာခြားဖြစ်နေယုံမကဘက်နှစ်ဘက်ရာဇ၀င်သဘောရန်စောင်နေကြသည်မှာလည်းလွပ်လပ်ရေးခေတ်မတိုင်မီကတည်းကဖြစ်ရာယခုအမှုသည်လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးသဘောဆောင်လာကာနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းပြည်နယ်၏အခြားတနေရာ၌လက်စားချေပွဲကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။အသက်တစ်ချောင်းအတွက်အသက်ဆယ်ချောင်းအလျော်ယူလိုက်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။ထိုမျှနှင့်မပြီးဘဲပြည်နယ်မြို့ တော်စစ်တွေတွင်ပုလိပ်ပစ်သဖြင့်လူတွေ ဒဏ်ရာရထားသောသွေးသံရဲရဲပုံများအင်တာနက်တွင်တက်လာသည်။စစ်တွေကအဖြစ်အပျက်သည်ကျောက်နီမော်ကမုဒိမ်း၊လူသတ်မှုကြောင့်သွေးဆူနေသောလူအုပ်ကြီးကအခြားအမှုတစ်ခုဖြင့်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည်။အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကအကိုင်အတွယ်မတတ်လျှင်အစိုးရသည်အချောင်တရားခံဖြစ်လာနိုင်သည်။ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည့်သမိုင်းသာဓကလည်းရှိခဲ့သည်။ပြဿနာတွေကြောင့်ဒုက္ခမဖြစ်၊ ဖြေရှင်းနည်းတွေကြောင့်သာဒုက္ခဖြစ်တတ်သည်။မည်သည့်ခေတ်၊မည်သည့်အစိုးရလက်အောက်၌မဆိုလူ့ အဖွဲ့ အစည်းအတွင်းလူအုပ်စုကြီးနှစ်ခုအဓိကရုဏ်း (communal strife) ဖြစ်လာလျှင် အုပ်ချုပ်ရေးသမားကဖြေရှင်းပေးသောနည်းသည်အောက်ပါလေးမျိုးအနက် တစ်ခုခုသာဖြစ်နေတတ်သည်။၁. နှစ်ဘက်စလုံးကျေနပ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်း - ရှာမှရှား - မရှိသလောက်နီးပါး၂. နှစ်ဘက်စလုံးမကျေမနပ်ဖြစ်ကျန်ရစ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်း - အများဆုံး နှင့် အမြဲတမ်းနီးပါးဖြစ်၃. ခံရတဲ့ဘက်ကကျေနပ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်း - အဆုံးတွင်ခံရသူကိုယ်စားလက်စားချေပေးခြင်းဖြစ်သွားတတ်၎. ပြုတဲ့သူဘက်ကကျေနပ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်း - ကျူးလွန်သူသည်အုပ်စိုးသူအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ၀င်ဆံ့နေသောအခါ(ဥပမာသတင်းထောက်ကိုပါးရိုက်သောရုပ်ရှင်မင်းသမီးအားစီးကရက်တစ်ဘူးဘိုးစာမျှဒဏ်ရိုက်သောအမှုမျိုး)ယခုပြဿနာ၏မူလဇစ်မြစ်သည်လတ်တလောအဖြစ်အပျက်များထက်ပို၍ကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်းသည်။ တအုံ့ နွေးနွေးဖြစ်နေသည်မှာကြာပြီ။လူတိုင်းပါးစပ်ကဘယ်လောက်လစ်ဘရယ်ကျနေစေကာမူကိုယ့်သွေးသားကိုထိလာလျှင်နာတတ်သည့် လူ့ သဘာဝကိုမည်သူမှတကယ်တမ်းမလွန်မြောက်နိုင်။ကိုယ်တိုင်မခံစားရသူများကိုရွှေပြည်အေးတရားဟောခြင်းခိုင်းဖြင့်လည်း မရနိုင်။ပြစ်ဒဏ်ထိုက်သင့်သူများကိုအမြန်ဆုံးနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ပြစ်ဒဏ်ပေးပြရမည်။ တည်ဆဲဥပဒေပြဌန်းချက်ဖြင့်လူထုခံစားချက်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်လျှင်တရားရေးရှုဒေါင့်(Judicial aspect) အပြင်နိုင်ငံရေးရှုဒေါင့် (Political aspect) ကိုပါပေါင်းထည့်၍ကျေနပ်သည်အထိဆောင်ရွက်ရန်သာရှိသည်။ယခုကိစ္စတွင်နိုင်ငံရေးရှုဒေါင့်ကိုပါထည့်သွင်းဖြေရှင်းရန်လိုအပ်မည်လား။ရခိုင်လူထုကျေနပ်အောင်တစ်ခုခုကိုလျှင်လျှင်မြန်မြန်နှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ပြသင့်သည်။ (အစိုးရသစ်ခေတ်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်သားများသည်ယခင်ကထက်ပို၍နိုင်ငံရေးနိုးကြားသည်။ မိမိတို့ ပြည်နယ်သည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံမှယခုရနေသည့် အခွင့်အရေးများထက်ပို၍ ထိုက်တန်ကြောင်းကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖေါ်ပြနေကြသည်ကိုမြင်နေရသည်။)မြန်မာနိုင်ငံတွင်သေဒဏ်သည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ (Penal Code)စာအုပ်ထည်းမှာရှိသေးသော်လည်းတကယ်တမ်းမကျင့်သုံးတာကြာပြီ။သေဒဏ်ပေးကာတကယ်တမ်းကွပ်မျက်ပစ်ခြင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုအဓိကရကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီခံကတုပ်နိုင်ငံကြီးများတွင်ပင်လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေသေးသည်ဖြစ်ရာလိုအပ်ပါကလက်မတွန့် သင့်။မိန်းခလေးတစ်ဦးအားဝိုင်းဝန်း၍မုဒိမ်းကျင့် - ပစ္စည်းယူ - လူကိုသတ်ဖြတ်အားလုံးတပြိုင်တည်းပြုမူခြင်းသည်အလွန်လူမဆန်သည့်သားရဲတိရိစ္ဆာန်အပြုအမူ(predation) ဖြစ်သည်။ လူမျိုးမရွေး - ဘာသာမရွေး - အရွယ်မရွေးမည်သူ ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေခွင့်လွှတ်ထောက်ထားညှာတာနေစရာအကြောင်းမရှိ။“မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံးတစ်လုံး - သွားတစ်ချောင်းအတွက်သွားတစ်ချောင်း”သည်တရားမျှတမှုသဘော၏တရားကိုယ်တစ်ခုလုံးမဟုတ်သော်လည်း၎င်း၏အစိပ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေသည်ကားသေချာသည်။(‘An eye for an eye’ is not justice in its entirety.But it certainly is an element of justice.)တဘက်တွင်မဆီမဆိုင်အပြစ်မဲ့သူဆယ်ဦးကိုလူအုပ်ကြီးကသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ကိုလည်းလျှော်ပစ်ရန်မဟုတ်။ ဒုတိယကိစ္စအဖြစ်မမေ့လျှော့စတမ်းဆက်လက်ကိုင်တွယ်၍တရားခံတွေရနိုင်သမျှရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ရမည်၊ တရားစီရင်ရမည်။ရာဇ၀တ်ကြောင်းတရားရေး (Criminal justice) တွင်ကျူးလွန်ခံရသူ(victim) သည်တရားလိုမဟုတ်။နိုင်ငံတော်သည်သာတရားလိုဖြစ်သည်။တတိယအချက်အားဖြင့်ပြည်တွင်းရှိအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကကျောက်နီမော်နှင့်တောင်ကုတ်တို့ ကလုပ်ရပ် ၂ခုစလုံးကိုရှုံ့ ချကြောင်းတရားဝင်အခမ်းနား များဖြင့်ကြေငြာသင့်ကြသည်။ ကျောက်နီမော်ကတရားခံများသည် မိမိတို့ ဘာသာဝင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်အလွန်ရှက်မိကြကြောင်း -သူတို့ ၏မိသားစုများကိုယ်စား၊ တရားလို၏ မိသားစုကိုတောင်းပန်ကြောင်းကြေငြာသင့်သည်။အပြန်အလှန်အားဖြင့်အပြစ်မဲ့လက်စားချေခံရသောသူများ၏မိသားစုများကိုလည်းရခိုင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကကိုယ်စားတောင်းပန်စကားဆိုသင့်သည်ဟုယူဆပါသည်။ ၀တ်ကြေ၀တ်ကုန်ကြေငြာချက်တွေထုတ်ကြဘို့ သာမဟုတ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမဲဆွယ်ကြတုံးကလိုတကယ်ကွင်းဆင်းလုပ်ကြရန်လိုအပ်သည်။မနေ့ ကဆူးလေဘုရားခြေရင်းတွင်လူတစ်ရာလောက်ဆန္ဒပြကြ၍လူတစ်ထောင်လောက်က၀ိုင်းကြည့်နေခဲ့ကြသည်ဟုဆိုရာပြဿနာသည်ပြည်ထောင်စု၏ကျန်ဒေသများသို့ ကူးစက်လာနိုင်သည်။ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ပြည်၊ မော်လမြိုင်၊ မုံရွာ၊ တောင်ကြီး၊ မြစ်ကြီးနား၊ မေမြို့စသည်မြို့ ကြီးတိုင်းတွင်အစ္စလန်ဘာသာဝင်တွေအများကြီး ရှိကြသည်။မြန်မာ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာသည်တစ်ချိန်ချိန်ထပေါက်မည့်ချိန်ကိုက်ဗုံးဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘန်ကောက်World Economic Forum တွင်ပြောသွားသည်။ယခုဘာသာရေး၊လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်မည့်ပြဿနာကအချိန်မရွေးထပေါက်မည့်တိုင်းဗုံးဖြစ်နေသဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးငယ်အားလုံးတို့ မှသူမအပါအ၀င်ခေါင်းဆောင်များနှုတ်ပိတ်ခေါင်းရှောင်လုပ်မနေကြဘဲဝိုင်းဝန်းထိမ်းပေးရန်တာဝန်ရှိပေသည်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့်မိမိနေရင်းမူလတိုင်းပြည်ရှိအမျိုးသမီးငယ်ကလေးများ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဘ၀လုံခြုံရေးအတွက်သူမကတစ်ခုခုလောက်တော့ထိထိရောက်ရောက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆပါသည်။တဘက်တွင်လည်း ဘင်္ဂလားနယ်စပ်က “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသူများကြောင့်ပြည်တွင်းကမြန်မာမူဆလင်တွေဒုက္ခမဖြစ်သင့်။ သူတို့ သည်ပုဂံခေတ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့ကြ၍လွပ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုလက်တွဲထူထောင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်သည်။“ရိုဟင်ဂျာ”ဟူသည်အရင်းစစ်လိုက်လျှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဿနာ(immigration question) သာဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာမျိုးနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိသည်။ အထူးအဆန်းမဟုတ်။သို့ သော်လူဦးရေဖိအား (population pressure) အဆမတန်များနေသောနိုင်ငံတစ်ခုနှင့်ကပ်နေမိလျှက်သားဖြစ်နေယုံသာမကကိုယ်တိုင်ကလည်းချိနဲ့ သောတိုင်းပြည် (weak state) ဖြစ်နေသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြဿနာပိုကြီးသည်။အကျင့်ပျက်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားကိုအသုံးပြုကာခိုးဝင်လာနေကြသည်မှာရာစုနှစ်တ၀က်မကရှိနေပြီ။အချိန်ကြာလာသည့်အခါလူဝင်မှု ပြဿနာ (illegal migration problem)ကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာ (political question) အဖြစ်ပြောင်းလဲဘို့ အားထုတ်လာသည်။၁၉၄၉ တွင်တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၇၈တွင်တစ်ကြိမ်အရေးယူရသည်။သို့ သော်တိုင်းပြည်ကလည်းချိနဲ့- လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနိုင်ငံတကာစံများ (internationally recognized norms) ကိုလည်းလိုက်နာရသေးသည်ဖြစ်ရာအပြတ်မလုပ်နိုင်ခဲ့။မောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့သူများကိုပင်ပြန်လက်ခံပေးခဲ့ရသည်။၁၉၈၈မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးအစဉ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာသောအခါအခွင့်ကောင်းကြီးကြုံကြိုက်လေတော့သည်။ လူ့ အခွင့်အရေးခေါင်းစဉ်နှင့်ကပ်၍နိုင်ငံရေးပြဿနာအဖြစ်ပွဲထုတ်ခွင့်ပိုရလာသည်။တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးသော(စစ်)အစိုးရကလည်းနိုင်ငံတော်အာဏာ၌တရားမ၀င်ဖြစ်နေခဲ့ရာဘာကိုမှထိထိ ရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်၊မျက်နှာစာပေါင်းစုံတွင်ခုခံရေးလုပ်နေရကာဤပြဿနာမှာပြစ်ထားသလောက်နီးနီးဖြစ်ခဲ့သည်။“ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံရေး” ၏အားသာချက်တစ်ခုမှာပြည်တွင်းမှာရှိဘာသာရေးတူသူတွေထံမှစာနာမှု (sympathy) ကို ရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ်ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေနှင့်မြန်မာ မူဆလင်တွေအကြားတွင်ဘာသာရေးမှလွဲ၍ကျန်အချက်အတော်များများကွဲပြားသည်။ ပုဂံခေတ်ကတည်းကယနေ့ မြန်မာပြည်ဖြစ်လာမည့်ဒေသတွင်ရောက်နေကြ သည့်မူဆလင်များသည်အခြားဒေသခံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုချင်းရောယှက်(cultural assimilation) မှုအတော်ရင့်ကျက်နေပြီးသားဖြစ်သည်။မြန်မာမူဆလင်အတော်များများသည်မြန်မာမှု၊ စာပေ၊အနုပညာ၊ဂီတ၊ ဗေဒင် ပညာမှအစတွင်လည်းမြန်မာများနှင့်တန်းတူထူးချွန်ကြသည်။လွပ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်စသည့်တိုင်းပြု ပြည်ပြု ပုဂ္ဂိုလ်အများလည်းသူတို့ ထည်းမှပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ သို့ သော်အာဏာရှင်စံနစ်အောက်လူဖြစ်လာကြသူမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည်စံနစ်ကြီးကြောင့်ပင်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် - ရှေ့ ကမျိုးဆက်များနှင့်စာလျှင်ပို၍နည်းသည်။ ဤသည်မှာအက်ဒ်မန်ဘာ့က်ပြောသလို “ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်စမ်းပါလို့ တိုက်တွန်းယင် - ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းချစ်ချင်စရာဖြစ်နေဖို့ လိုတယ်။”(To make us love our country, our country ought to be lovely. Edmund Burke) ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်နေရာသူတို့ ကိုတဘက်သတ်အပြစ်တင်၍လည်းမဖြစ်နိုင်ချေ။အထူးသဖြင့်ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူ ပြည်တွင်းမွေး-ပြည်ပရောက်မျိုးဆက်သစ်များသည်သူတို့ ကိုယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားဟူသည့် identity ထက် မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ(ခရစ်ယန်၊ အစ္စလမ်) ဖြင့်အများအားဖြင့် identified လုပ်ကြသည်။ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ(မြန်မာမူဆလင်)ကိုမြအေး၏ သမီးသည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌မြန်မာစစ်အစိုးရဆန့် ကျင်ရေးဆန္ဒပြရာတွင်အစ္စလမ်ထုံးစံခေါင်းစည်း (Hijab) ၀တ်ဆင်ကာမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုမြေတွင်ချ၍ခြေဖြင့်နင်းထားကာဆန္ဒပြခဲ့သည်။ သူမသည် U.K တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” အရေးကိုစွမ်းစွမ်းတမန်ရှေ့ တန်းကလုပ်နေသူဖြစ်သည်။သူမနှင့်အလားတူလုပ်ရပ်များကပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံသားမြန်မာမူဆလင်များနှင့်ရိုဟင်ဂျာများအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်ဟူသောအထင်မှားကိုဖြစ်စေလေသည်။ယခင်အပါတ်ကအဖြစ်အပျက်သည်ရခိုင်ပြည်နယ်နေ “ရိုဟင်ဂျာ” အချို့ ၏ ရမ်းကားမှုဒဏ်ကိုပြည်တွင်းမူဆလင်တွေကအစားဝင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်ပြည်တွင်းနေမြန်မာ မူဆလင်(အဖွဲ့ အစည်း)များသည်မိမိတို့ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နေရိုဟင်ဂျာဆိုသူများဘာမှမပါတ်သက်ကြောင်း၊ သူတို့ ၏ရက်စက်သောလုပ်ရပ်များကိုဆန့် ကျင်ကြောင်းကြေငြာ၍ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ပြရန်လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ကိုမြအေးတစ်ဦးတည်း - ပြဿနာဖြစ်လာပြီးမှ - သူ့ ရပ်တည်ချက်ကြေငြာပေးတာကိုလက်ခံသော်လည်း မလုံလောက်ပါ။အစိုးရသစ်အနေနှင့်လည်းပြဿနာကိုသမရိုးကျအုပ်ချုပ်ရေးနည်းများ(administrative measures) ဖြင့် ဖြေရှင်း၍မရလျှင် ယခင်အစိုးရဟောင်းလက်ထက်ကလိုစစ်တပ်ကို အားကိုးမည့်အစားလူထုခေါင်းဆောင်များ၊ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံနေရသူများနှင့်လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်ဆိုသူများကပါပူးပေါင်းပါဝင်၍ဖြေရှင်းပေးကြရန်အစိုးရကကမ်းလှမ်းသင့်ပါသည်။လိုအပ်မည်ထင်ပါကသူတို့ အားလုံးပါဝင်သည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကော်မတီကြီးတစ်ခုအစိုးရကကမကထပြုဖွဲ့ စည်း၍ယခုကိစ္စကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများကိုတော့မထည့်သင့်ပါ။[ယခုပြဿနာသည်ဘာသာရေးပဋိပက္ခသဘောဆောင်လာနိုင်သည့်အတွက်ဘာသာရေးဝန်ထမ်းတွေပါလာလျှင်ပို၍ကောင်းဘို့ထက်ပိုဆိုးဘို့ ကသာ၍များပါသည်။]နိုင်ငံရေးကိစ္စတွင်ဘာသာရေးကိုအသုံးချမိလျှင်နောင်အခါသူတို့ ကိုတားဆီး၍ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။Myanmar Express
From : ကိုမျိုးချစ်
ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။ မူဆလင်ကုလားက မူဆလင်ကုလားဘဲပေါ့။ ဘာမြန်မာလူမျိုးလဲ။ဂျာနယ်တွေကလည်း မသီတာထွေး အသတ်ခံရတာကို မရေးကြဘူး။ ကုလား၁ဝယောက် ဂုဏ်ပြုဖို့သွားတာ လမ်းမှာအသတ်ခံရတာတော့ ပွနေအောင်ရေးကြတယ်။ မြန်မာပြည် ချမ်းသာဖို့လိုနေပါပြီ။ ခုလို မြန်မာပြည်ချမ်းသာမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေတာကို တစ်ခြားပါတီတွေကလဲ ကိုယ့်ပါတီကြောင့်မဟုတ်ဘဲလူများပါတီကြောင့် မဖြစ်ရဘူးဆိုတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ မူဆလင်တွေရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က တစ်ကမ္ဘာလုံးကို မူဆလင်ဇာတ်သွင်းရေးဘဲ။ အရမ်းတော်တဲ့ ကော့ကေးရှမ်းတွေကိုတော့ သွားလုပ်လို့မရပါဘူး။ ပြန်နှိပ်ကွပ်ခံနေရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေအရမ်းညံ့နေလား။ ကိုယ့်မြေမှာနေပြီး ပြန်နှိပ်ကွပ်ခံနေရတယ်။ ရခိုင်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ကို မူဆလင်မြန်မာနိုင်ငံတော် မတည်ထောင်နိုင်ဖို့ ခံတပ်တစ်
ခုပါ။ အဲဒီ ခံတပ်ကြီးကို မပြိုကွဲဖို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အင်အားဖြည့်ပေးပါမယ်။ အင်ဒို၊ မလေးနဲ့ ဘရူးနိုင်းတို့ကအစက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ။ခုတော့ကျသွားပါပြီ။ ကျွန်းသူတွေ
ကို ကုလားက ယူတယ်။ ကုလားတွေ မောင်းတောတို့၊ ဘူးသီးတောင်တို့ဖက်မှာ လာအခြေချသလို အင်ဒိုတို့၊ မလေးကျွန်းတွေမှာလာအခြေချတယ်။ ခုမူဆလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ ဘယ်ဂျာနယ်မှ ဆောင်းပါးမပါကြလို့၊ အသေချာဆုံးသတင်းဋ္ဌာနကိုပို့လိုက်တာပါ။ စာပေစီစစ်ရေးဆိုတာလိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြား
သားက ငွေများများနဲ့လာပြီး ကိုယ့်နိုင့်ငံရဲ့မီဒီယာဂန္ဃကို လာထိန်းချုပ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မီဒီ
ယာတွေမှာ သူတို့ပါစေချင်တဲ့ သတင်းပဲပါလာမှာပေါ့။ မည်သူ့ကိုမျှ စွပ်ဆွဲနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ မသီတာထွေး ရက်ရက်စက်စက်အသက်ခံရသည့် အချိန်က မည်သူမျှ မသိလိုက်ပါဘူး။ ကုလားတွေအသက်ခံရမှအုပ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ကုန်တယ်။
ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံက ခုချိန်မှာချမ်းသာတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပါပြီ။ မည်သူလုပ်၍ ဖြစ်
စေ။ မည်သည့်ပါတီလုပ်၍ ဖြစ်စေ။ ကိုယ့်ပါတီလုပ်တာမဟုတ်ရင် ဖြတ်လို့ ဖြတ်စီးလုပ်ရမည်ဆိုတဲ့ အ
တွေးမျိုးတွေ ခေါင်းထဲမထားသင့်တော့ပါဘူး။ တောင်သူက ဆန်ဈေးတက်လျှင် တက်သည့်အချိန်မ
ရောင်းဘဲ ဒေါ်စုအာဏာရသည့်အချိန် ထိုင်ဆောင့်ရမှာလား။ စဉ်းစဉ်းစားစားလဲပြောကြပါအုံး။ ဒီမိုကရေစီ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့။ ခုတော့ ကုလားတွေကပါ ဒီမိုကရေစီပြောနေပြီ။ နောက်၁ဝနှစ်လောက်ကြာရင်ပဲ င်္နိနမေူ မူတွေပြောတော့မယ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းတော့မယ်။ ဒေါ်စုကကုလားကိစ္စမှာ စကားတစ်ခွန်းမှာထွက်မလာဘူး။ ဘာလို့လဲခင့်ဗျာ့။ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ ဒီမိုကရေစီအရမေးတာပါ။ ဒေါ်စုနဲ့ြှီူ က နိုင်ငံကို ပါးစပ်နဲ့ဘဲချစ်ပြနေတာ။ နိုင်ငံအတွက်ပါးစပ်နဲ့ဘဲလုပ်နေတာ။ ခုလို စစ်တပ်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ စစ်ကား ၈စင်းနဲ့ သွားတာကိုတော့၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့၊ ဒီမိုကရေစီတို့ မအော်လောက်ပါဘူးနော်။ွှ့နှအအေနျ မှာလဲမူဆလင်တွေအတွက် ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးခင်
ဗျာ့။ မက္ကာမှာလဲ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် အခွင့်အရေးမရှိဘူးခင်ဗျာ့။ ဒေါ်လေးစု မက္ကာကိုသွားလည်ပါလားခင်ဗျာ့။ ခုတော့ ရခိုင်တွေနဲ့ မြန်မာတွေက ဒီမိုကရေစီတွေ ဘာတွေစိတ်မဝင်စားဘူးခင့်ဗျာ့။ မူဆလင်တွေကိုဘဲ မုန်းတီးနေတာခင်ဗျာ့။ ဒေါ်လေးစုပါ မုန်းသွားအုံးမယ်နော်။ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ စစ်တပ်မရှိရင်အကုန်သေကုန်လိမ့်မယ်ခင်ဗျာ့။ တကယ်တမ်း တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေး၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေပေးစပ်ပြီး တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာခင်ဗျာ့။ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ၉ဝ% က မချမ်း
သာကြဘူးခင်ဗျာ့။ တိုင်းပြည်အတွက်၊ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် အသက်ပေးနေတာခင်ဗျာ့။ ဒေါ်စုတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာ ၂၄ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ တပ်ကဆရာကြီးတွေ၊ ဗိုလ်ကြီးတွေ၊ ဗိုလ်မှူးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အသက်၁၉နှစ်ကဘဲ စစ်ထဲဝင်ထားအုံး၊ ၅ဝကျော်တွေအျားကြီးဘဲ ခင်ဗျာ့။ တိုင်းပြည်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတာ အနှစ် ၃၁ နှစ် အထက်ပဲခင်ဗျာ့။ တပ်ကလူတွေက တိုင်းပြည်အတွက် ပါး
စပ်နဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ခင်ဗျာ့။ အသေခံလုပ်နေရတာခင်ဗျာ့။ အရေးရယ်၊ အကြောင်းရယ်ဆိုရင် ပြည့်သူ့ရှေ့က အရင်ဆုံးအသေခံရတာခင်ဗျာ့။ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာ
တော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်။ သူတို့လဲ လူတွေဘဲ။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အမှားလုပ်လို့ နောက်
ကလိုက်ရှင်းရတာ တပ်မတော်သားတွေခင်ဗျာ့။ အသက်ပါပေးစပ်ရတာခင်ဗျာ့။ ဒေါ်စုလဲအမှားတွေအများ
ကြီးလုပ်နေတာဘဲ။ တပ်မတော်သားတွေက ဒေါ်စုကိုမထောက်ခံလို့လား။ ကုလားကြတော့ မဲလိုချင်လို့
လား။ တစ်ခွန်းမှာမပြောဘူး။ ဒေါ်စုနဲ့ြှီူ တွေက စစ်တပ်ကို ရန်သူလိုသဘောထားနေတော့ စစ်
တပ်ကလည်း ဒေါ်စုကိုမထောက်ခံဘူးခင်ဗျာ့။ ကိုယ့်ကိုလဲ အသေခံတိုက်ခိုင်းအုံးမယ်။ ကိုယ့်ကိုကြတော့လည်း မေတ္တာမရှိ။ ရစရာမရှိအောင်လဲပြောသေးတယ်။ မထောက်ခံဘူးခင်ဗျာ့။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အ
စည်းကထောက်ခံမှု့မရှိရင် မည်သည့်အရပ်သားအစိုးရမျှ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်လို့မရပါ။ ဘာလုပ်ကြမှာလဲခင်ဗျာ့။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာမည့်သည့်နိုင်ငံရေးသမားမျှ နိုင်ငံကောင်းစားဖို့ ဦးတည်မလုပ်ခဲ့ပါ။ ဃသာာကညငျအ တွေကိုပဲကြည့်။ သူတို့ပါတီအာဏာရဖို့ဘဲ ဦးတည်ပြီး၊ လက်ရှိအစိုးရမှန်သမျှပြုတ်ကြဖို့ဘဲလုပ်သွားတာခင်ဗျာ့။ ဦးနုရဲ့ ဖဆပလအစိုးရကိုလဲ ဖြုတ်ချ။ အိမ်စောင့်အစိုးရကိုလဲဆန့်ကျင်။ ကိုယ့်
ပါတီမှမဟုတ်ရင် လက်ရှိအာဏာအစိုးရတိုင်းကို ဆန့်ကျင်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ့။ ဒေါ်စုလဲ ခသာာကညငျအတွေနဲ့တူနေပြီခင်ဗျာ့။ အာဏာရအစိုးရတိုင်းကတော့ နိုင်ငံကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ချင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ ဆန့်
ကျင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်နေကြတာကို ခင်ဗျာ့။ အခုတော့ ယခင်စစ်အစိုးရကတော့ မရ ရအောင်လုပ်သွားပြီ။ အာဏာစွန့်လွှတ်ပြီး သမ္မတလက်ထဲကို အာဏာထည့်သွားပြီ။ လက်ရှိအရပ်သားအစိုးရကလဲနိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။ှညေခအငသညျ တွေပြုတ်သွား
ပြီ။ နိုင်ငံကြီး ချမ်းသာတော့မယ်။ နောက်ပြီး ဒေါ်စု၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီး ကိုလဲသွားပြီး ပြသနာမ
ရှာပါနဲ့ခင်ဗျာ့။ တပ်မတော်သားတိုင်းက အထက်အရာရှိစကားနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စကားကလွဲပြီး မည်သူ့စကားကိုမှာနားမထောင်းဘူးခင်ဗျာ့။ အဲဒါ နိုင်ငံအတွက် ကံကောင်းတာခင်ဗျာ့။ အာဏာသိမ်းချင်
တဲ့လူကတော့ သိမ်းကိုသိမ်းမှာခင်ဗျာ့။ မာလီမှာဆိုရင် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ကအာဏာသိမ်းသွားတာခင်ဗျာ့။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် စည်းကမ်းသေဝပ်တဲ့ စစ်တပ်ရှိနေတာ အများကြီးကံကောင်းတာခင်ဗျာ့။ မဟုတ်
ရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက အာဏာသိမ်းလိုက်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးက အာဏာသိမ်းလိုက်နဲ့ လည်နေမှာခင်ဗျာ့။ ခုနိုင်ငံကြီး ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်လဲရောက်နေပြီ။ တိုးလဲတိုးတက်တော့မယ်။ ဒေါ်စုလဲ သမ္မတဖြစ်နိုင်
တာဘဲ။ မြန်မြန်တိုးတက်သွားတော့မကောင်းဘူးလား။ ဘာလို့ပြည်သူကိုလမ်းမထွက်ခိုင်းရတာလဲ။ ကု
လားကိစ္စကြတော့တစ်ခွန်းမှမဟဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမည့် ကိစ္စတွေ ဘာကြောင့်ဝိုင်းကူမလုပ်
တာလဲ။ ဥပမာ -–ဒေါ်လာဈေးသတ်မှတ်ဖို့ စသဖြင့်ပေါ့ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က နိုင်ငံကြီး
နှစ်နိုင်ငံကြား ညပ်နေတာခင်ဗျာ့။ မြန်မာတွေ မြန်မြန်ချမ်းသာသင့်နေပါပြီ။ အစိုးရအဆက်ဆက်လဲ အ
ခက်အခဲတွေကို အများကြီးကျော်ဖြတ်ရတယ်ခင်ဗျာ့။ အဓိကကတော့ ပြည်တွင်းသောင်းကြမ်းမှု့ကို အရင်
နှိမ်နင်းရတယ်ခင်ဗျာ့။ ခုလို ဒေါ်စုတို့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေရာတော်တော်များများကို လျှောက်သွားနိုင်
တာ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေအသေခံတိုက်ပေးထားလို့ခင့်ဗျာ့။ စစ်သားလုပ်ရတယ်ဆိုတာ မလွယ်ဘူးခင်
ဗျာ့။ စစ်ဆင်ရေးသွားရင် ချေထောက်တွေမှာ သဲဝဲစားရောခင်ဗျာ့။ နွားချေရာခွက်ထဲက ရွှံရေလဲ ရွှံစော်နံ
နေလဲသောက်ရတာဘဲခင်ဗျာ့။ အမေရိကန်စစ်သားတွေလို သဲကန္တာရထဲမှာ ရေကူးကန်နဲ့၊ ဘတ်စ်ကတ်
ဘောကွင်းနဲ့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ့။ တစ်ခါတစ်လေ ၁ ပတ်၊ ၁ လ လောက် ထမင်းမစားရဘူးခင်ဗျာ့။ တစ်
ခါတစ်လေ ရန်သူ့နယ်မြေထဲ သတင်းယူဖို့ သွားရတာခင်ဗျာ့။ သေလူလို့ မပြောနဲ့။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်
တောင် ရန်သူဖမ်းမိပြီး ဘယ်လောက်နှိပ်စက်ခံရ ခံရ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လူလို့သတ်မှတ်မထားဘူးခင်ဗျာ့။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်ပြည်အတွက် ပါးစပ်နဲ့လုပ်နေတာ မဟုတ်ဖူးခင်ဗျာ့။ တကယ်လုပ်နေတာခင်ဗျာ့။ ဒေါ်
စုနဲ့ြှီူ တွေက ပြောလိုက်ရင် စစ်တပ်ကဘဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ အဓိကရန်သူလိုလို၊ ဘာလိုလိုနဲ့။ ဒေါ်စု
တို့ ကျွန်တော်တို့တိုက်ပေးထားတဲ့ အဖြူရောင်နယ်မြေမှာလဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနေသေးတယ်။ မအေး
ချမ်းအောင်လဲလုပ်တယ်။ ကုလားကိစ္စကြတော့ ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုလဲ အားနာပါအုံး
ခင်ဗျာ့။ အရေးရယ်၊ အကြောင်းရယ်ဆို၊ ပြည်သူက စစ်တပ်ကိုဘဲအားကိုးတာခင်ဗျာ့။ ဒေါ်စုနဲ့ြီူ ကို
အားမကိုးဘူးခင်ဗျာ့။ ခု ရခိုင်တွေရယ်၊ မြန်မာရယ်၊ စစ်တပ်ရယ်ကတစ်ဖက်၊ ဒေါ်စုရယ်၊ြှီူ တွေ ရယ် ကုလားတွေရယ်က တစ်ဖက်ဖြစ်နေပြီခင်ဗျာ့။ အရေးရယ်အကြောင်းရယ်ဆို ပြည်သူက စစ်တပ်ကို
ဘဲအားကိုးတာခင်ဗျာ့။ ကျွန်တော်တို့က ပြည်သူ့ရှေ့က ရင်ဖက်ကြီးနဲ့ ခံပေးတာကို။ ဒေါ်စု ရခိုင်တွေအ
တွက် ဘာလုပ်ပေးလဲ။ မူစလင် မုန်းတီးတဲ့ပြည်သူတွေ အတွက်ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ။ မူဆလင်တွေဆီက မဲ
ရဖို့ဘဲမျှော်မှန်းတော့မှာလား။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ စည်းလုံးဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ အရမ်းနောက်
ကျသွားရင် လူမျိုးပျောက်သွားတော့မယ်ခင်ဗျာ့။ Myanmar Express Read More
ကုလားရန်ကြောင့် ထွက်ပြေးလာရသော ရခိုင်မိသားစု (ဗွီဒီယို)
From : မြန်မာ့အလင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ် ရွာတော်ခရိုင် နတ်ကျောက်ဆော်ရီမြို့နယ် မရှက်ချောင်းဒေသရှိ ရခိုင် ကျေးရွာတချို့မှ လယ်မြေများကို အခြေချရန် ရောက်ရှိလာသူ ဘင်္ဂလီများမှ အတင်းအဓမ္မ သိမ်းဆည်း ထားကြောင်း ဘင်္ဂလီ သတင်းစာ တစ်စောင်က မေလ ၂၇ ရက်နေ့က ရေးသား ဖေါ်ပြသည်။
ငါတို့မြန်မာ့မြေတွင် မွတ်ဆလင်တွေလို အဖေက သမီး၊ သားက အမေ၊ အစ်ကိုက ညီမ၊ တူက အဒေါ်၊ မြေးက အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အဖြစ်မျိုးလုံးဝမရှိ။ တရုတ်လိုလည်း ကလေးအရင်းကို မိန်းခလေးဖြစ်လို့ မွေးခန်းထဲမှာ သတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုးငါတို့မှာ မရှိ။ အနောက်ဖက်လိုလည်း ကာကွယ်ဆေးမှာ အဆိပ်ခတ်တာမျိုးလည်းမရှိ။ ဒီမိုသမားတွေအချင်းချင်း စောက်တင်းပြောတာတွေ ကြားဖန်များလို့ ၊ မကြီးမငယ်ရန်ဖြစ်တာတွေ မြင်ဖန်များလို့သာ မြန်မာဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ငယ်နေခြင်းဖြစ်၏ ☼ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ဂုဏ်ယူတတ်ပါစေ။☼ ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒ အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်လာပါစေ။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့၌ ဆူပူ အကြမ်း ဖက်မှုများ ဖြစ်ပွား၊ ဒေသ ရပ်ရွာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရှိစေရေး အတွက် ပုဒ်မ (၁၄၄) ထုတ်ပြန်၍ ထိန်း သိမ်းဆောင်ရွက်
From : သမ္မတရုံးနေပြည်တော် ဇွန် ၈ ရက် နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် နှင့် အညီ အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကို ပုံဖော်တည်ဆောက်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိုလည်း အလေးထား ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ လတ်တလော ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားသည့် အခြေ အနေများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှ စတင်၍ အကြမ်းဖက်သူများက လူနေအိမ်များ၊ ဈေးဆိုင်တန်းများ၊ တည်းခိုခန်း စသည်တို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ လူအချို့ကို ရန်ပြု သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ် တို့တွင် ပုဒ်မ (၁၄၄) ထုတ်ပြန်၍ ဒေသတည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယနေ့ နေ့လည် (၁)နာရီခန့်တွင် အကြမ်း ဖက်သူ အင်အား (၁၀၀၀) ကျော်ခန့်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ် အဆောက်အအုံ၌ အဖီချထားသည့် အမိုးအားဆွဲချ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ယူနိုက်တက် တည်းခိုခန်းနှင့် နေအိမ် တစ်လုံးတို့ အား ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကကြောင်း။ နေ့လယ်(၂)နာရီ ခန့်တွင် သီရိမင်္ဂလာခန်းမရှေ့ သဇင်တည်းခိုခန်း၊ စားသောက်ဆိုင် ဈေးတန်းအား မီးရှို့ ခဲ့ရာ ဆိုင်ခန်း(၆)ခန်း မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ နာရီစင် နှင့် ဆေးရုံကြား ရှိ ရပ်ကွက် (၄) သို့ မီးကူး စက်လောင်ကျွမ်းပြီး စုစုပေါင်းနေအိမ် (၁၅)လုံးခန့် မီးလောင် ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း၊ မြို့ ဦးရပ်ကွက်၌ လည်း နေအိမ်(၂)လုံးအား မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ မောင်တော-အလယ်သံကျော် ကားလမ်းပေါ်ရှိ ဒူးချီးယားတန်း ကျေးရွာအုပ်စု ခရေမြိုင်ကျေးရွာအား မီးရှို့ခဲ့ကြကြောင်း။ ညနေပိုင်းတွင် ဆူပူသူ (၂၀) ဦးခန့်သည် မောင်တောမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် နှောက်ယှက်ခဲ့ သည့် အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ပုန်းရှောင်နေ ခဲ့ရကြောင်း၊ ဆေးရုံအရှေ့ ရှိ မြို့မ အရှေ့ရပ်ကွက်မှ နေအိမ် (၂) လုံးအား ထပ်မံ မီးရှို့ ခဲ့သည့်အတွက် ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ ပြည်သူများ ပြောင်းရွှေ့ ရှောင်တိမ်းခဲ့ရကြောင်း။ ထို့ပြင် ဆူပူသူများ၏ ရန်ပြု မှုများကြောင့် ဒေါက်တာ ခင်မောင်လတ် (၆၃) နှစ်၌ ဝမ်းဗိုက်ဓားထိုးခံ ဒဏ်ရာ၊ ဒေါ်သန်းရီ (၅၇) နှစ်၌ ဦးခေါင်းတွင် ဓားခုတ်ခံ ရ ဒဏ်ရာ၊ ဦးကျော်လှ (၇၈) နှစ်၌ ဦးခေါင်းတွင် ဓားခုတ်ခံရ ဒဏ်ရာ၊ ဦးသိန်းဇော် (၃၆) နှစ်၌ ခြေ၊ လက်တို့တွင် ဓားခုတ် ခံရ ဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရှိခဲ့ပြီး ဦးလှမောင် (၆၅) နှစ် မှာ ဦးခေါင်း ဓားခုတ်ခံရ ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ မောင်တောမြို့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များ၌ နယ်မြေခံရဲတပ်ရင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ ဆူပူမှု များအား သေနတ် ပစ်ဖောက် ခြောက်လှန့်ဖြို ခွဲ၍ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မီးငြိမ်း သတ်ခြင်း၊ ဒေသခံ ပြည်သူတို့၏ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှု စစ်ဆေးရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်မှူး ကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့ ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်း ဖက်မှုများသည် နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေသည့် အတွက် အခြေအနေ အားလုံးကို အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းပြီး ဒေသရပ်ရွာ တည်ငြိမ်အေး ချမ်းမှု ရရှိစေရေးအတွက် မောင်တောမြို့ နယ်နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ်တို့ တွင် ပုဒ်မ (၁၄၄) ထုတ်ပြန်၍ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။Myanmar Express
စစ်ပြင် ဆင် မှု ကြား ထဲ က KIA နှင့် အစိုး ရ ဆွေးနွေး ပွဲ
အစိုးရတပ်ဖွဲ့များသည် ကချင်လွတ်လပ်ရေး KIO/KIA အဖွဲ့အပေါ် တင်းကြပ်သော လုံခြုံရေးများနှင့် တပ်ဖွဲ့များ တိုးချဲ့ချထား လာနေသဖြင့် သဘောတူထားသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွ...
အသုံးချခံအဖြစ် ပါဝင်နေသူများအား ပါတီအဖြစ်မှ ရပ်စဲသည်အထိNLD အရေးယူသွားမည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်မီကာလ အထိ ပါတီတွင်း၌ အခြားခြား သော အဖွဲ့ အစည်းများ၏အသုံး ချခံသတင်းပေးများရှိခဲ့ပြီး ယခု လက်ရှိအခြေတွင်လည်း ရ...
ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင့်တိုင် မြို့နယ် အမှိုက်ပုံး အတွင်းမှ လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ တွေ့ရှိ
[image: ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင့်တိုင် မြို့နယ် အမှိုက်ပုံး အတွင်းမှ လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ တွေ့ရှိ]
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ရက် ညနေ (၄)နာရီ(၁၀)မိနစ်...
အစားအစာကို အစာကျေသွားမှ ချီးမွမ်းရာ၏။
မယားကို အရွယ်ကျသွားမှ ချီးမွမ်းရာ၏။
သိန်း ၁ဝဝ ခန့်တန် ကျောက်စိမ်း ရွှေလက်စွပ် ပျောက်ဆုံးမှုကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဇေယျသိဒ္ဓိ ရပ်ကွက်ရှိ ----တိုက်တွင် ဧပြီ ၂၇ ရက် ည ၁ဝ နာရီခန့်က အိပ်ခန်း အတွင်းရှိ စားပွဲခုံပေါ်တွင် ထားရှိသော ကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိ...
အမျိုးသမီးသုံးဦးကို ဆယ်စုနှစ်ခန့် အိမ်ခန်းအတွင်း အဓ္ဓမပြုပြု ကျင့်သူကို သေဒဏ်ချမှတ်
အမေရိကန် နိုင်ငံ အိုဟိုင်းအိုး ပြည်နယ် ကလီဗီလန်း မြို့တွင် အမျိုးသမီး သုံးဦးအား ပြန်ပေး ဆွဲပြီး နေအိမ် ၏ အိပ်ခန်း အတွင်း ဆယ်စုနှစ်ခန့် ပိတ်လောင်ကာ အဓ္ဓမြ...
ကေအိုင်အေနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ၏နောက် ကွယ်တွင်
ကေအိုင်အို/ကေအိုင်အေအဖွဲ့ဟာ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကာလ များကို အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ နေ့ရွှေ့၊ ညရွှေ့အချိန်ဆွဲနေစဉ်မ...